Ubuhle kwi Bayou
Igumbi lokulala eli-2 elipholileyo kwiBayou Manchac. Ukukhwela iKaya kunye nokuhamba ngephenyane kuyafumaneka kwindawo. I-gazebo enkulu enebhodi yokuhamba ngeenyawo ukuya kwidokhi. Iwasha, isomisi, indawo yokupaka, ihammock, iijingi, kunye nomgodi womlilo okhoyo ukuze usetyenziswe ngasese. Kufuphi nevenkile ethengisa ukutya, ukuqaliswa kwesikhephe, kunye neendawo zokutyela ezininzi zasekhaya. Ibala lemidlalo le-LSU leTiger likwimizuzu engama-34 kuphela! Thatha ikhefu kwitekhnoloji kwaye wonwabele le propathi ithule kwaye izolile. Indawo yokungena ephakanyisiweyo ifikeleleka kuphela ngezinyuko.
Thatha ikhefu kwitekhnoloji kwaye ujabulele ikofu yasekuseni kunye nemibono ebukekayo kwiveranda egqunyiweyo, ukugcoba phantsi kwe-gazebo, ukukhwela iphenyane kwi-bayou, ukuloba kwi-dock kunye nokulala kwi-hammock. Zisa isikhephe sakho sokuloba kunye nokuzonwabisa kuMlambo i-Amite kunye neLake Maurepas ekufutshane.
I-cottage ikwisangqa esincinci esifihlakeleyo samakhaya eBayou Manchac. Uhola wendlela 42 ukusa kuhambo olonwabileyo olusemazantsi eLouisiana olubonisa iLive Oaks enkulu njengoko usondela ebumelwaneni.
Umnini ufumaneka ngeselfowuni kwaye uhlala eyimizuzu nje kude.